You are here: Home Home Mashiinkii Rogista waraaqaha ee SNM: (Qormo xiiso badan)
Mashiinkii Rogista waraaqaha ee SNM
(SNM Duplicating Machine)
(Qormo xiiso badan)
Balka warrama dadkaa ab ka ab reer magaalka ahaa ee nidaamkii Siyaad Barre qaxa iyo wax aanay qayibin abidkood baday.
Aynu ku noqonno Mashiinkeennii mowduuca inoo ahaa. Bal hadda u fiirsada qafaska ama birta uu saran yahay. Waa sanduuq lagu keeni jiray rasaasta qoriga faalka ah. Waxa ay ka mid ahaayeen qafasyada aanu ugu jecel nahay. Wax kasta oo dhulka yaalba aboor ayaa ku bixi jiray oo aroortii marka aad toosto ayaad arki jirtay. Waxa qasab ahayd noloshii aanu ku noolayn in aad wixii qalab ah wax ka hoosaysiiyo oo weliba waxaasi ay bir noqdaan